Filannoo Israa'el: MM Netniyaahuun marsaa shanaffaaf dorgomaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Israa'el filannoo waliigalaa baroota keessatti morkiin cimaadha jedhame irratti mul'ate gaggeessaa jirti.
Dursaa paartii warra leellistoota jedhaman (right-wing) Likud Party kan ta'aniifi Ministirri Muummee Israa'el Beenjaamiin Netniyaahuu marsaa shanaffaatiif mo'achuudhaaf fedhaa jiru.
Haata'u malee, himannaan malaammaltummaa waliin walqabate irratti dhiyaataa jiruufi morkiin cimaan gaggeessaa waraanaa duraanii Benny Gantz yaaddaa hawwii isaa kana milkeessuu itti ta'aniiru.
Obbo Gantz, dursaa paartii warra gidduura jiru jedhaman 'Blue and White alliance' jedhamuun beekamanii, dhimmoota ijoo akka nageenyaa irratti Obbo Netniyaahootiin cimanii morkachaa kan jiran yommuu ta'u siyaasawwan qulqulluu ta'e akka hordofan waadaa galaa jirus.
Labour Party warra Israa'el jedhamu kan bara 1990n keessa warra Paalastaayin waliin waliigaltee nagaa mallatteessee ture, garuu waggoota dhiyoo keessa warra fialatanirraa deggersa dhabaa dhufeera.
Goodayyaa suuraa Ministirri Muumme Israa'el beenjaamiin Netiniyaahoo (C-R)fi paarlaamaan Sadaasa 26, 2018 Yerusaalemitti yeroo walga'an
Isreaa'el keessatti teessuma paarlaamaa 120 ta'u paartiin teessoo gara caalu mo'atee beeku hin jiru. Manni maree biyyattiifi mootummaan yeroo hundaa qindoominan uumuudhaan ture kan ijaaramu.
Yeroo bu'aan filannoo dhufuu jalqabu saatii 22:00 (19:00 GMT) Kibxata irraa kaasee mootummaa qindoominaa uummachuu irratti mareen jalqabama.
Yaadni dhumaa filannoo dursee sassaabame akka agarsiisutti morkattoonni ciccimoo lamaan kan kokkeetti walqabaniifi tokkoo tokkoon isaanii teessuma 30 argatan ta'uu agarsiisa.
Sirna paartii faffaca'aa Israa'el keessatti baramaa ta'e keessatti ammallee carraan kan Obbo Netiniyaahoo ta'a sababiin isaas qindoomina haarawaa ijaaruu danda'a waan ta'eef jedha gabaasaan BBC Tom Bateman Yerusaalemirraa.
Yaalii teessuma paarlaamaa warra gara malee leellistootadha jedhamanii beekaman murtaa'aa taasisuudhaaf taasiseefi ballinaan irratti qeeqamanii turan Obbo Netiniyaahoon.
Pirezidaantiin Israael Jushoota Itoophiyaa waliin marii'atan
Israa'el baqattoonni Afriikaa guyyoota 90 keessatti akka bahan ajajjee
Guraandhala keessa parrtiilee warra gara malee leellistoota ta'aniifi namoonni baayyeenillee warra sanyummaa leellisan waan ta'eef paarlaamaa seenuu hin qaban jechuun yaadan kana waliinis hariiroo uummatanii turan.
Araboonni Israa'el keessa jiran uummata walii galaa biyyattii keessa jiran shan keessaa harka tokko ta'u. Garuu kanneen filachuu danda'an keessaa kan walakkaatti dhiyaatan qofa filachuuf kan qophaa'aa turan.